Lakkaawwiin Dhaamaa dha
Keewwata ammaa yk keewwatawwan filataman keessatti, lakkaawwii fi raasaasaawwan dhaamsa.
Sadarkaa tokko olkaasi Olkaasi
Keewwata filame sadarkaa tokko caaaa lakkoofsaan ykn rasaasan gadbu'e siiqsa.
Sadarkaa tokko gadbuusa Gadbuusa
Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin guddisuu
Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin lakkaawwii sadarkaa tokko ol baasa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.
Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin Gadbuusii
Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin sadarkaa tokko gadbuusa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.
Galfata Lakkaafsa Hinqabnee Saagi
Keewwata tokko lakkaawwii malee saaga. Lakkaawwiin duraanii hinjijjiiramu.
Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi
Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin gara olii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.
Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi
Keewwatawwan qabxii xixiqqaa maraa waliin gara gadii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.
Lakkaawwii barruu lamkaasa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.
Rasaasawwanii fi lakkoofsisuu
Title is: Kabala Rasaasawwan fi Lakkaawwii